Mgbakwunye Nkọwapụta Ahịa YouTube Site na Ọkachamara Ọkachamara
YouTube bụ ụzọ dị irè maka ahịa ahịa. Kwa ọnwa,ndị ọrụ ịntanetị na-ele ma ọ dịkarịa ala awa isii nke YouTube Videos. YouTube bụ search engine kachasị elu n'ụwa niile - dominio barato 2012. The saịtị nwereihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ. Ọ na-eru ndị na-ege ntị karịa karịa netwọk ọ bụla. Ya mere, Mgbakwunye ahịa site YouTube bụọmarịcha ahịa azụmaahịa.
Alexander Peresunko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ọrụ nke Ọkachamara Digital Ọrụ, na-akọrọ ya ahụmahụ nke Mgbakwunye YouTube Marketing.
Gịnị bụ YouTube Mgbakwunye Marketing?
ahia mgbasa ozi YouTube na-agụnye ịmepụta vidiyo naegosiputa njikọ nke njikọta na nkọwa vidio. Ebumnuche nke njikọ ahụ bụ ịdọrọ okporo ụzọ ndị ọrụ na onye mmekọebe ọdịda. Njikọ ahụ nwekwara ike iduzi ndị ọrụ na mpempe akwụkwọ ndebanye email na ebumnuche nke ịkwalite ọrụ mmekọ ma ọ bụ ngwaahịa.
Ọrụ ndị na-aga na Mgbakwunye Marketing
Ndị ọrụ YouTube niile nwere ike itinye aka n'ahịa ahịa. Ndị ọrụ na-azụliteihe dị na YouTube nwere ọtụtụ ihe mmekọ na-enye na nkọwa vidio. YouTube bụ netwọk na-ewu ewu n'etiti ọdịnayandị mmepe na ndị ọrụ. E nwere ụzọ abụọ nke ndị ahịa ahịa. Akụkụ mbụ gụnyere ndị ahịa ahịa. Ihe ndị a dị njọndị mmepe ọdịnaya na-egosi njikọ njikọta oge ụfọdụ na vidiyo YouTube ha. Ha na-eji ahịa mmekọ maka ịmepụtaòkè nke ego ha. Ndị mmepe nwere isi ego ndị ọzọ; dịka ọmụmaatụ, nkwupụta mgbasa ozi yana ọdịnaya akwado. Ụdị nke abụọgụnyere ndi ahia ahia. Ha na-eji ọwa YouTube iji nyefee ọrụ ụlọ ọrụ naanị. Marques Brownlee (MKBHD)bụ otu saịtị YouTube nke nwere njikọ mmekọ mmekọ Amazon iji welie usoro SEO.
Ngozi ego nke YouTube Affiliate Marketing
Ndị ọrụ YouTube nwere ike irite ọtụtụ nde dollar site na okporo ụzọsite na njikọ nke mmekọ..Ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ ndị na-adịghị ahụkebe na ịzụlite ọdịnaya ndị a ma ama nwere ike ịnweta nil ma ọ bụ ọbụna ntakịrịlaghachi. Ihe a na-enweta site na YouTube SEO usoro na-adabere na echiche, onyinye, na ọrụ ndị ọrụ. Ụfọdụ ọdịnaya enweghị ike ịgaviral. Otú ọ dị, onye mmepụta ga-enwe ike inweta ego. "Ịtọ BlueHost" bụ ihe atụ nke vidiyo nke na-apụghị ịmalite ịrịana YouTube. Ma ọdịnaya nwere ike ime ka ndị ọrụ ndị ahịa si na engines ọchụchọ. Vidio ahụ ga-emepụta ego zuru ezu ma ọ bụrụ na ọ dị eluenwe mmasi na engines ọchụchọ. A na-echebara ndị ọrụ ahụ maka nke ọma n'ihi isi okwu dị ike. Ọzọkwa, onyinye ahụ na-enyeego ntinye akwụkwọ siri ike
Uru nke YouTube Mgbakwunye Marketing
Usoro SEO dị irè na YouTube n'ihi na ikpo okwu nwereọtụtụ ijeri ndị na-arụsi ọrụ ike n'ụwa nile. Ihe omimi vidiyo na enwe nnukwu onu ogugu na YouTube. Site 2019, ihe dị ka 80% nke ịntanetịọdịnaya ga-abụ vidiyo. Ndị na-emepe vidiyo na YouTube ga-enwe ọtụtụ echiche na nnukwu ego. Mpaghara vidio nwere okeasọmpi n'ihi ihe dị iche iche dị iche iche na-adọta ndị niche. YouTube nwere ulo nlekota nke oma. N'ihi ya, ọdịnayandị mmepe ji n'aka na ị ga-enweta okporo ụzọ site na SEO usoro. Ndị mmepe ọdịnaya nwere ike ịnweta ndị na-ege ntị na-ege ntị na YouTube. Ndị ọrụ nwerenhọrọ nke ịdebanye aha na ọwa YouTube. Ha ga-enweta vidiyo ọhụrụ site na ọwa ahụ ọbụlagodi na ndị mmepe anaghị etinye aka na vidionkwalite. Usoro SEO dị mfe n'ihi na 55% nke google na-achọ ịmepụta vidio YouTube.
Ihe ịma aka nke YouTube Affiliate Marketing
Ndị ọrụ choro mma ọdịnaya. Maka usoro SEO dị irè,ndị mmepe ga-emerịrị vidiyo na-adọrọ adọrọ. Enwere ike ịzụlite ụfọdụ ọdịnaya dị icheiche na-akọwapụta ihe. Dịka ọmụmaatụ, vidio nkà na ụzụchoro nnukwu nkà na ego iji mepụta. YouTube nwere njikọ njikọta na ndị ọrụ na-emepụta ọdịnaya spam. Ụfọdụ isiokwu nkịtịenweghị ike ịchọta okporo ụzọ zuru oke na YouTube. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ndị mmepe na-enye ọdịnaya.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya maka ndị mmepe ọdịnaya ka ha jiri nyocha YouTubemaka SEO na njirimara ahia ahia. Enwere mpi mpi maka ndị mmepe na-ebuli video dị eluọdịnaya.